Khuphela uze ufake i-ArcGIS Pro - Geofumadas
Ukwenza ukufakwa kwesicelo se-ArcGIS Pro, izibonakaliso ezininzi ezidweliswe ngezantsi kufuneka ziqwalaselwe.
I-imeyile: ukuze wenze i-akhawunti ehambelana ne-ArcGIS Pro, i-imeyli kufuneka isebenze, kuba zonke iinkcukacha zithunyelwa kulokhu ukuze kusebenze umkhiqizo.
Kubasebenzisi abasebenzisa i-akhawunti ye-ArcGIS ye-Intanethi, abakwazi ukusebenzisa iziqinisekiso ezifanayo ukuqhuba i-ArcGIS Pro, njengoko zi-akhawunti ezifani ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukuba i-akhawunti ivuliwe kwi-ArcGIS Pro, kunye ne-imeyile efanayo eyayisetyenziselwa i-ArcGIS Online, ezi ziza kuhambelana ngokuzenzekelayo kwaye zonke iimveliso ezidalwe kwi-desktop yesicelo kwiwebhu ziya kubonakala.
Iziqinisekiso: ngexesha lokudala igama lomsebenzisi oyintloko, kufuneka bahlale bekhona, bakwazi ukufikelela kwisicelo se desktop.
Ukukhuphela, ukufakwa kunye nokufikelela kwi-ArcGIS Pro.
Emva kokuqwalasela ingqalelo apha ngasentla, siyaqhubeka nenkqubo yokukhuphela, ukufaka nokufikelela kwi-ArcGIS Pro. Kulo mzekelo, i-akhawunti yami yakwa-Esri iya kudala nokusetyenziswa kwe-ArcGIS Online.
Fumana kwisiphequluli kwiphepha lewebhu ArcGIS Pro, nqakraza kwisikhetho sovavanyo samahhala.
2. Ithebhu entsha ivula apho ungayifumana ifom apho idatha ifakwa khona. Ezi nkcukacha zibalulekile, ekubeni i-imeyili echazwe, iya kufika isaziso sokudala i-akhawunti.
3. Emva koko, i-imeyile ihlolwe kwaye iqinisekiswa ukuba umyalezo wokuqalisa ufikile, ukuba kunjalo, nqakraza kwikhonkco lokusebenza, kwiphepha elivula, liya kufakwa kwigama lomsebenzisi eliya kuba ne-akhawunti yakho ye-ArcGIS Pro kunye nephasiwedi. .: umsebenzisi: abc123_ab / iphasiwedi: xxxxx
4. Emva koko, iphepha livulekile ukuseka iiparameters zentlangano, kwaye idatha efunekayo ifakwe kwifom kwaye isebenze.
5. Ukuze uqhubeke, iphepha le ntlangano sele lidalwe livuliwe, apho yonke idatha iya kugcinwa, eyenziwa ngumbutho ngokwawo. Ngokufanayo, iikhredithi ezifunyenweyo ngokudala i-akhawunti ziboniswa.
6. Ukuze kusebenze ukusetshenziswa kwesicelo, icandelo apho iilayisensi zilawulwa khona, kwaye ithebhu entsha ivuliwe, apho abelwe khona omnye ukuba asetyenziswe kamva.
7. Ekupheleni kwesabelo seelayisenisi, kungeniswa kwimenyu yomsebenzisi, kwaye ukhetho lwami lwe-Esri lukhoyo. Kule nyathelo kufuneka uqaphele, ekubeni umsebenzisi kunye namaphasiwedi afakwe kule ngongoma, AKUFANANI na iziqinisekiso ze-ArcGIS Pro.
8. Ukuqala, nqakraza ukudala i-akhawunti entsha kawonkewonke uze ugcwalise idatha kwifom. Qaphela ukuba igama lomsebenzisi alikwazi ukufana nelinye eladalwe ngaphambili kwi-ArcGIS Pro, kufuneka libe elitsha. .: umsebenzisi: abc123_ab123 / iphasiwedi: xxxxx
9. Emva kwesinyathelo esedlule, kuqinisekiswa ukuba i-imeyile yokuqalisa ifikelele kwi-akhawunti yami yakwa-Esri.
10. Iinkcukacha ezihambelanayo zifakwe kwifomu, kunye nale ntsebenzo, enye ixabiso leenkcukacha zifunyenwe eziza kudibanisa i-1200 ekusebenziseni izixhobo zewebhu ze-Esri.
11. Ekugqibeleni, ubuyela kwiphepha lenhlangano kunye kwimenyu yomsebenzisi, ukhetho "Uvavanyo lokulanda" lukhona, ithebhu entsha ivuliwe apho unokukhuphela khona isicelo.
12. Emva kokufaka isicelo esilandiweyo, kuqhuba ukufakwa kwikhompyutheni, ngokulula, njengaye nayiphi na inkqubo.
13. Ekupheleni kokufakela isicelo sivulwe, kwaye iziqinisekiso zokungena ngemvume zicelwa, umsebenzisi wokuqala owenziwe uyabekwa (umsebenzisi: abc123_ab / iphasiwedi: xxxxx)
Ukuba amanyathelo ayenziwa ngokuchanekileyo, ukufakwa kwenkqubo kuya kuphumelela, kwaye baya kukwazi ukwenza zonke iintlobo zeenkqubo kule sicelo.
Nayi vidiyo echaza le nkqubo.
Post edlulileyo«Edlulileyo #BIM - Ikhosi yokuHlaziya ye-Autodesk - kulula
Post Next Bona i-UTM idibanisa kwi-Google Maps kunye ne-Street ViewOkulandelayo "
Impendulo ibenye ku “Khuphela kwaye ufake iArcGIS Pro”